DEG DEG: Ciidamo ka socda AMISOM oo caawa la wareegay xarumaha ugu muhiimsan Dhuusamareeb +War cusub! | HalQaran.com
Galgalduud (Halqaran.com) – Wararka naga soo gaaraya caawa magaalooyinka Guriceel, Dhuusamareeb iyo Galmudug ayaa sheegaya, in ciidamo ka tirsan howlagka Midowga Afrika ee AMISOM ay halkaasi gaareen,
Ciidamada ka socday AMISOM ayaa maanta waxaa duleedka magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan, waxaa ku celiyey ciidamo ka amar qaata Ahluu Sunna, balse dowladda federaalka ayaa u dirtay Saraakiil ka socotay qeybta 21-aad ee xoogga dalka.
Wada hadal dheer ka dib ayaa AMISOM loo ogolaaday inay gudaha u galaan gobolka Galgaduud, waxaana qeyb ka mid ah ay ku hakadeen magaalada Gurceel, halka qeyb kalana ay gaareen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug.
DAAWO SAWIRRO: Ma Ogtahay in madaxda DF Somaliya aysan ka qeybgelin xil wareejinta Duqa Muqdisho +SABAB!
Ciidamada ayaa la dejiyey xarumaha ugu muhiimsan magaalada waxaana ka mid ah xarumahaas, Madaxtooyada INJI ee uu ku shaqeeyo madaxa xukuumadda Galmudug, Garoonka Diyaaradaha Dhuusamareeb, Guriga Gobolka iyo Hoolka lagu qabanayo shirka dib u heshiisiin Galmudug.
Wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay amaanka la joogi doonaan ciidamada ay dowladdu geysay magaalada Dhuusamareeb.
Ciidankaan ayaa kasoo ambabaxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxayna Jimcihii maanta ku hakadeen duleedka magaalada Matabaan, kaddib markii ay is hortaageen ciidamo ka amarqaada hoggaanka Ahlu-Sunna, halkaas oo ay ka baxeen xili dambe oo galabta ah.
Ciidamadaan ka socda howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ee gudaha u galay deegaanada Galmudug ayaa isugu jira Jabuutiyaan iyo Itoobiyaan.
Si kastaba ha’ahaatee, dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa u muuqata inay si buuxda ula wareegtay gacan ku heynta degaanada Galmudug ee ay ka arimi jireen Ururka Ahlu Sunna.
la geeyay Dhuusamareeb
la wareegay xarumo muhiim ah